Vikela izintatheli. Umkhankaso weDaphne Caruana Galizia
12 uJan 2018
Ukuvikelwa kwezintatheli. Ngamazwi mahhala
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 12. January 2018
#PixelHELPER incoma 100.000 € kusuka ukuze uthole ulwazi okuholela ekuboshweni abangobhongoza lokubulala Daphne Caruana Galizia. Sicela ukusekela umkhankaso wethu pixelhelper.org/de/spenden Ndawonye nenhlangano IL-KENNIESA sihlela izenzo global tinkhomba ababulali ukuqoqa nokwakha ingcindezi abezindaba emazweni iqhaza.
"I-Manifesto ebhalwe ngegazi labanye" - yilokho isazi-mlando saseMelika uMike Davis esibiza ngokuthi ibhomu lemoto. I zakamuva kakhulu zalezi zinhlelo manifestos lalinabashumayeli Semtex, eyaziwa nangokuthi iziqhumane plastic, enamathiselwe phansi emhlophe Peugeot 108 endaweni kwegceke e Bidnija, 309 abakhileyo amakhilomitha nanye entshonalanga capital Malta sika Valletta.
Ku-16. Okthoba, uDaphne Caruana Galizia, iminyaka engu-53 ubudala, uthatha isondo lemoto yakhe. Yena ushayela umgwaqo owubhuqu emgwaqweni omkhulu, jikela kwesokunxele, sehle egqumeni kuyiphi kungabonwa kusukela inhlansi ezikude zolwandle, esidlule encane, landfill zasendle kanye esingamahektare zucchini, 270 amamitha, kuze uphawu obomvu-Umncele, lapho i-hedgehog ibuza umshayeli wemoto ukuba angaboni ukulingana kwakhe. Ukuqhuma, abaphenyi bakholelwa, kubangelwa umakhalekhukhwini. Ukuze 15.04 pm izinsalela kukhona Peugeots 100 amayadi angu enkundleni eduze komgwaqo. Ongoti eziyisikhombisa Dutch forensic ngubani nokuhlola izinsuku ezintathu kamuva Mater Dei Hospital of Valletta Galizias isidumbu, ungatholi kakhulu ukubona. Kukhona okuncane kwesokunxele komzimba wezintatheli zezwe owaziwa kakhulu futhi owaziwa kakhulu. wayekade posted on blog yakhe imizuzu 29 ngaphambi kokufa kwakhe, amazwi akhe okugcina alo mBhalo: "Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi bheka manje: Yonke indawo kukhona lamasela. Ukuphelelwa ithemba. "
Ngemva kwesonto, amadodana amathathu Galizias e iPhalamende EU eStrasbourg, impikiswano ngalokho lokubulala kanina Malta futhi mhlawumbe ku EU uthi. IPhalamende eliGreen uSven Giegold uthatha imakrofoni. "UDaphne wabulawa emgwaqweni. Kwakungekho ndawo yokucasha, ababulali babo abazange bazame ukwenza ukuhlaselwa kubonakale njengengozi. Ngokuphambene nalokhu, lokhu kwakuwukubonakaliswa kwamandla okunonya, "usho kanje. Kusobala ukuthi kungani ibhomu wayengekho ngaphansi imoto ka isikhulu samaphoyisa noma Attorney General: "Kwakungenxa uDaphne, owaliphonsa ukukhanya phezu simiso zemali kanye nenkohlakalo Malta - kwakungeyona lezi iziphathimandla."
Nakuba eStrasbourg enkonzweni yesikhumbuzo iyasebenza, ingena Rosy Bindi, inhloko-Italian anti-Mafia ikhomishana, ihhotela Excelsior ezindongeni emzini Valletta. Kwaphela izinsuku ezingu-iKhomishana e Malta esendleleni, ukuvakasha kwase kuyisikhathi eside kuhlelwe, kodwa manje, ngemva kokubulawa blogger, inzalo omkhulu. Njengoba lizungezwe izwe onogada bushelelezi gelled, okusobala ikhebula nezikulufi kusukela amasudi ezindlebeni, Bindi ihlala phansi etafuleni bese ubuka izintatheli abebelinde heavy lesikhumba izihlalo kuso. I-mafia, kusho uBindi, ubona iMalta ngokuthi "ipharadesi elincane". Futhi "abahlinzeki bezezimali abanganikeza ukuvula amabhizinisi eMalta" nabo "yingxenye yenkinga".
Ku-Malta, izitatimende zikaBindi zinkinga. Uye waba uchwepheshe wamafiya ase-Italy amashumi eminyaka, ngakho igama lakhe linesisindo. UMalta ulokhu ulwela idumela lawo kusukela ekubulaweni kweGalicia.
Ukubulala kwakhe, njengoba abaningi bekubona esiqhingini, bekuyimibonakaliso yokuthi labo abazimisele kakhulu ukulwa nobugebengu abasaqiniseki ngeMalta.
UGiegold, oye wabamba iqhaza ekukhokhiseni intela amashumi eminyaka futhi uyazi ukucwaninga kukaGalizia, ufuna ukuba uphenyo lwamazwe ngamazwe athunyelwe. Ufuna ukuxoshwa kukaNdunankulu waseSocialist uJoseph Muscat futhi uqinisekise ukuthi iPhalamende laseYurophu lifuna ukuthumela izithunywa eMalta ukuze "zibuyiselwe umthetho".
Akuyedwa kuphela osibona ngaleyo ndlela. Uma ubika kulezi zinsuku mayelana iyizwe eliyisiqhingi, bese imali inkulumo abamnyama, izinkampani igobolondo, intela ezindaweni, Uxhumano amnyama Azerbaijan, uwoyela osekwande kakhulu, ipasipoti yokuthengisa ukugembula ku-intanethi. Umlando omkhulu kunazo zonke waseGalizia uye waba negalelo kulokhu. Indodana yakhe uMathew isebenza kwinethiwekhi yokucwaninga i-IJIC, eveze ama-Panama Papers ka-2016. Mayelana naye uGalile wamamukela imibhalo ephathelene noMalta. Wathola ukuthi Keith Schembri, uMphathi IKhabhinethi uNdunankulu Muscat, nalowo asebenzisana naye Konrad Mizzi - kuphela amandla, namuhla uNgqongqoshe ukuvakasha - izinkampani phambi babekhuluma kuyi-British Virgin Islands futhi Panama. Konke lokhu ayozithola ndawonye zibe isithombe belusizi lapho imingcele phakathi ezingabazisayo izinkampane osopolitiki, imithombo kahulumeni impikiswano ezingenayo kanye nobugebengu obuhleliwe kubonakale ukuncibilikisa.
Kuyinto isithombe kahle elifana ne-nedlelo Valletta, okuyizinto agcwele osomabhizinisi kanye nabafundi ezishukiwe, nge imoto-free, edolobheni elidala isihlabathi-anemibala, okuyinto inhlokodolobha yaseYurophu kwamasiko emasontweni ayisishiyagalolunye - engenakuqhathaniswa ezivulekile Medieval Museum, ngokusebenzisa kwansuku amashumi ezinkulungwane zezivakashi kanye pennants alo amibalabala ulandele isiqondiso ekuphileni njengoba ezimpini zenkolo ejwayelekile zabo, bese kusihlwa, ujabule ukuvumela fafaza ulwandle spray eSt Julian, ngakolunye uhlangothi bay ukudla unogwaja obomvu kanjalo newayini pintweise hinterherzukippen Cisk isitokwe.
Abanye babo babheka uJonathan Ferris. Ngosuku lwesishiyagalolunye emva kokufa kukaGalile, uhlezi nezibuko ezincane ezithandweni eziluhlaza okwesibhakabhaka endaweni yokubambela iWestin Dragonara. Ngaphambi kwe-glass facade, amagagasi awela emadwaleni, kuma-sofas ahlala imindeni ehleleke kahle ekugqoka umkhumbi. UFerris uyinhloko yezokuphepha yehhotela elinezinkanyezi ezinhlanu, futhi lokhu kusikisela ukuthi izinto azifani ngendlela efanele eMalta.
Ngoba kuze kube ngonyaka odlule kwakuyisikhulu samaphoyisa aseFerris, obhekene nemali yokwehliswa kwemali. Uthi, ibhulogi kaGalizia, iye yamsiza njalo ekuphenyweni. "Wazi izinto esingazazi. Abantu bathembela izintatheli kunokuba amaphoyisa. "Ferris abaqeqeshiwe nozakwethu e Brussels, China, eJalimane, wahola Gaddaffis ezimali ngo-November 2016 esikhundleni njengenhloko Maltese anti-zemali igunya (FIAU). Phakathi kuka-March no-July 2016 2017 imibiko emine esolwa enkohlakalo izikhulu zikahulumeni wabhala. Konke, kusho uFerris, kwakusekelwe ocwaningweni lwaseGalizia. Ubani ofuna ukumlandela, uma engena emininingwaneni, kuthatha isikhathi.
I ukulandisa okufutshane zezifundo FIAU kanjani: iKhabhinethi abakhulu Keith Schembri esetshenziswa inkampani yakhe ibhokisi lemeyili e Panama futhi ukufihla 100.000 euro, yena selishintshiwe kusukela ukudayiswa passport ezintathu Maltese ukuze baseRussia. Wakhokhela isigamu sezigidi ze-euro ngezifumbathiso kumphathi wephephandaba laseMalta. UFerris ukholelwa ukuthi iSikri wayefuna ukuqinisekisa ukuthi iphephandaba likahulumeni lilokhu lilinganiselwe. Ngesikhathi esifanayo wayefuna ukuqinisekisa ukuthi leli phephandaba okwengeziwe ubheke iphepha zabo kuye, njengobe sideline Schembri namanje iphepha yomthengisi. Futhi: I-Schembri kanye noNgqongqoshe wezeMandla wangaphambili uKonrad Mizzi bathole izifumbathiso ezivela eDairobi kusukela enkampanini edayisa igesi egcwele amanzi eMalta. Le mali nayo yagijimela ezinkampanini zebhokisi lezincwadi ezimbili. I-blog yokugcina ye-blog ye-Galizia "Yonke indawo i-crooks" okubhekiswe kulawa mabhizinisi.
I-1,07 million euro yezinkontileka zikagesi?
I-Schembri noMizzi bayaphika konke. Yini abaningi ongangabaza umthetho Malta: Imibiko ka FIAU Asiseshwanga ethunyelwe eBhodini Labaqondisi noma emaphoyiseni - noma phansi kusukela ngqo amafayela. Babengenayo imiphumela.
Imibiko ehilelekile kuFerris, osebenza naye uCharles Cronin noma owayengumphathi we-FIAU uManfred Galdez. Akekho osekhosini. UGaldez wahamba, okusho ukuthi uyedwa, ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi. Ku-16. UJuni 2017 wamxosha u-Ferris noCronin, umlandeli wakhe, imvulophu emhlophe enesandla sabo. UFerris uthi: "Angikaze ngiyazi isizathu. Kusukela ngaleso sikhathi wayengakwazi ukulala kuphela ngamaphilisi. I-FIAU ithi i-taz ithi "inesithakazelo sayo ukuxosha uFerris noCronin" ngezizathu zokusebenza ".
Ukube wayehlala neFIAU, ngabe ulandela umlando omkhulu wokugcina waseGalile, kusho uFerris. Kwakuphathelene noMichelle Muscat, umkaNdunankulu. On the akhawunti lenkampani yakhe Egrant ePanama kufanele geleza zivela Azerbaijan 1,07 million euros - justament ngemva Malta futhi Azerbaijan ongene esivumelwaneni igesi izimpahla nge ngonyaka 18 eside. "Bafuna ukuvimbela lolu phenyo," kusho uFerris. Uphikisana negunya lokulwa nenkohlakalo ukumbuyisela.
Lokho imibiko FIAU abangu abubone ngaphambili, ikhona indoda ngubani uzibiza ngokuthi "umfuziselo Daphne kwezombusazwe" futhi kwaba isifuba. USimon Busuttil ungumphathi we-PN yokulondoloza, iqembu elilodwa eliphikisayo; indoda enesitayela nezwi lomshumayeli wethelevishini yase-United States, amathempeli akhe, ama-black lace on the lapel. "Izindaba kuphela nge-WhatsApp," usho kanje. "Inombolo yami iyahlolwa." Izivakashi elamukelayo egumbini inkomfa eliphikisayo e isakhiwo ephalamende, isikhala aquarium-njengalelo lubhakuza phezu mgwaqo abezinyawo ka Valletta.
Njengoba uGalilezia isusa izinto eziningi ngokumelene nohulumeni, uNdunankulu uMuscat ukhethe ukhetho oluzophela ngoJuni. UBusuttil wayeyi-candidate ophezulu wokuphikisa. Omunye wabeka imibiko ye-FIAU kuye. I-Busuttil isakaze yonke imininingwane ngenjabulo phambi komshini. Akuzange kusize: iMalta yaqhubeka ithembekile kuMuscat. I-Busuttil ilahlekile, okungenzeka ukuthi yenziwa ngenxa yokuthi umnotho waseMalta ukhula. "Ngemva kwalokho, ngangifuna ukuyeka kancane kancane ezombangazwe," usho kanje. "Kodwa manje, ngemva kokufa kwakhe, konke kuhlukile."
NgoJulayi, uBusuttil ucele amaphoyisa ukuthi aphenye izikhonzi. I-Schembri neMizzi zifake isikhalazo. "Uma ngilahlekelwa, ngizoya eStrasbourg," kusho uBusuttil. Ufuna ukuqeda umsebenzi kaGalizia.
I-Blogger ihlasele kakhulu uMuscat, bonke abanye uhulumeni, kodwa futhi kunezigaba ezinkulu zokuphikisa. Ingxenye nge "izihloko ezinengqondo", njengoba ngisho nezitha zabo ezimbi kakhulu endlunkulu yeqembu elibusayo PL lithi. Ingxenye ngokuhlaselwa komuntu siqu nemibhalo ngokuphila kwakhe kocansi. Kodwa akekho eMalta okholelwa ngokungathí sina ukuthi kwakuyizombusazwe ezikhohlakele ezanamathela ibhomu ngaphansi kwemoto yakhe.
Imfundiso e Malta - futhi Italy - kungenzeka ukuzwa ukuthi Galizia wangena ucwaningo lwabo ku nokushushumbisa lwamafutha Libya eningizimu Yurophu Mafia ezinyaweni zakhe. Lokhu kucabanga kusekelwa ukuthi eminyakeni emibili eyedlule kuye kwaba nokuhlaselwa kwamabhomu amahlanu eMalta abahlukunyezwayo abavela emphakathini wezigebengu. Akekho owaziswa. Njalo ama-Semtex asetshenzisiwe. Lokhu kukhishwa, isibonelo, eLuyan Zuwara - lapho kuvela khona amafutha okuthutha.
Noma kunjalo, abaningi eMalta bathola i-Muscat ukuba ibhekene nokufa kukaGalicia nokuziyeka. Akuningi ngoba amaphoyisa awazange avikele iGalileya. Eqinisweni, i-Blogger isenqabele ukuvikelwa kwamaphoyisa ngoba esaba ukuthi lokhu kuzothinta umsebenzi wakhe. bagomele ekhatsi Muscat, umndeni Galizias, phikisa izintatheli Maltese, iphini Busuttil zavela ngale ndlela: ". Ayikho into engenziwa yokulwa nenkohlakalo, inqobo nje elonakele izikhonzi akahlale ehhovisi" Ukuze ukubekezelela ibhizinisi labo, buthaka isimo sika Izikhungo - futhi ngaleyo ndlela zibekezelela ibhizinisi lezigebengu ezihleliwe.
Kodwa-ke, ukuphikiswa akukona ukuvulwa ngaphansi kwezimo. I-Malta ithembele ngokwezomnotho ezintela ezincane kakhulu ezinkampani, imboni yokugembula e-intanethi kanye nokuthengiswa kwamaphasipoti kubantu abavela kwamanye amazwe abacebile. I-Busuttils i-PN inikeza lokho. "UMalta uthengise ubukhosi bawo ngemali engcolile," kusho uGreen Giegold. "Yithathe indawo yokubusa komthetho ngesimiso sokungabi nabulungisa nokuhlukunyezwa phakathi kwezepolitiki nezomnotho."
Edolobheni yekhasino of St. Julians e Malta i eMayfair eziyinkimbinkimbi, omunye izakhiwo eziningi zasehhovisi kuyinto esiqhingini, lapho amagama ezinkampani international ngokufaka ebhokisini leposi. Izinkampani ekwakhiweni zaziyi-"Malta Files", ukuvuza kulesi sibuko ngoMeyi odlule. Kwaphawulwa ukuthi abantu baseSpiegel babethukuthele, njengoba abanikazi bezindawo emahhovisi babethi kwakukhona ibhizinisi langempela. Manje, ngemva kwezinyanga eziyisithupha, isithombe, eMayfair foyer kuyafana: K + S, Sixt, BASF futhi Jacobs - amabhokisi emeyili eliwumkhehlekhehle ezingaphansi bezinkampani global, zonke namanje lapho.
Ukubeka inzuzo eMalta kuhoxisa: Ezingxenyeni ze-35 zentela ezikhokhelwa yiMalta ezinkampanini zokuhweba, ibuyisela emuva kumaphesenti angu-30; Yilokho kuphela okumangalisayo mayelana namaphesenti angu-5. I-Malta yayizoba "indawo engcolile", i-Galizia ibhale ngakho.
UNgqongqoshe Wezezimali akanamahloni
Iphephandaba lansuku zonke i-Malta Today libalwe ukuthi i-2015 isithole inzuzo ye-4 billion euros ukusuka eMalta. Izwe livunyelwe ngaphansi kwezintela zezigidi ezingu-250. Izigidigidi ze-1,4 ziyolahlekelwa kwezinye izimali. U-Edward Scicluna, uNgqongqoshe wezeMali waseMalta, uthuthumela ikhanda lakhe. "EMalta, lapho inkokhelo eyodwa-yesihlanu ephakeme kunaseJalimane, ingabe izisebenzi lapha zingasho ukuthi zikhohliswa ngamakhokhelo amane? Yiqiniso, "kusho uScicluna. "Kunenkinga yokubona." Izwe lakhe liphathwa ngokungafanele, uhlelo lwakhe lwentela "aluqondi kahle." Izwe aliyona indawo yokukhokha intela kodwa linikeza "amanani entela" okuncintisana. "Ingabe lokhu kufanele kube namahloni?" Ubuza. "Cha!" Eqinisweni, abanikazi inkampani uyokhokha amaphesenti angaphezu kuka-5 - ngoba bebengayikuba ayanda ngokuwina ezingaphansi kwabo yebo yena intela ekhaya.
Ukuthi lokhu kwenzeka ngempela, kodwa akukho okuphephile, kusho uGreen Giegold. "Malta anikezwe izinzuzo zayo intela kungakhathaliseki kuziwa intela yesibili." Kwakukhuthaza kakhulu ukufunda ngesikhathi inombolo ephezulu kakhulu izinkampani zangaphandle esiqhingini kanjani enhle.
Kodwa ukuvala "Ukulinganiselwa" kwezinkampani ezinkulu zaseJalimane - asikho isizathu, kusho uScicluna. "Lokhu kusemthethweni ngokuphelele." Ukwehla kwemali kwenzeka kuzo zonke izifundazwe. "Kodwa yabakhulu ukunikeza nabancane okufanele asolwe ngakho ufihle izinkinga zabo." Imithetho Malta wayebubonisile ihlolwe ngaphambi EU ukubusa, izwe ngabe njalo kuhlolelwe zemali izintuba. Iqede ukufihlwa kwebhange futhi yamukela umyalelo we-EU wokulwa nokukhishwa kwemali i-ATAD, kusho uScicluna. "Ngaphezu kwalokho, sinikeza lonke ulwazi ngesicelo kusuka phesheya."
Ngosuku lwesishiyagalolunye emva kokufa kukaGalizia, uNdunankulu uMascat uzobe esebenza e Dubai nge-"Global Citizenship" seminar. Ilandelwa nguHenley & Partner - i-ejensi edayisa amaphasipoti kaMalta ngeyunithi yamayunithi ye-900.000 Euro. Ubuzwe ngokutshalwa kwemali yilolu hlelo lohlelo. I-Muscat ikhuluma ngezinzuzo "okunye okuphilayo nokuzakhamuzi" kuletha kuba-elites.
Kudlulela ukuthengisa ngemali emnyama
"Izibalo ezimnyama ezivela eRussia naseMpumalanga Ephakathi" zizobe zenziwe ngokuthi "i-Fake Maltese," i-Galizia ibhale. Kubo, ibhizinisi lepasipoti alilutho ngaphandle kwesinye isango lemali emnyama. UNgqongqoshe Wezezimali uScicluna akafuni ukwamukela lokho. Izigidi zabangaphandle zizokwamukela ama-visa e-EU njalo ngonyaka. "Amakhulu ambalwa uMalta athengise kuze kube manje awubonakali ngisho nezibalo," usho kanje. "Ngokuvamile abadwebi noma abadlali abafuna ukuba izakhamuzi zomhlaba" abathenga izakhamuzi zaseMalta.
Ukungabaza okuncane ngokuqondene nomsuka wendawo kwakwenqatshiwe, okwakungenxa yesicelo ngasinye sesine. Ngaphezu kwalokho, uthi iScicluna, i-EU Commission iye yahlola lolu hlelo futhi ayihambanga. "Amanye amazwe enza lokho ngaphandle kwe-EU seal, kodwa ukhomba umunwe wakho." Eqinisweni, akuyona nje i-Austria edlula iphethini efanayo. I-Germany iphinde ivumele oqashile ukuba bahambe, batshale imali okungenani isigidi esisodwa se-euro.
Ngehora leshumi nanye emva kokufa kwe-blogger, abesifazane babuthana phambi kwehhovisi likaNdunankulu uMuscat sika-magnificent beaming. I-Beatles ixosha kusuka kusikhulumi esincane. Abaningi lapha bangaphansi kwe-PN noma bavela endaweni yabo, kodwa akekho othanda ukuzwa lokho. Isenzo sakho "asiyona ingxenye", yebo. Baqhaqha amacu bese bebonke ndawonye. Kude isikhathi bafuna ukuthatha indawo. Wonke umuntu ugqoke i-T-shirt efanayo. "Kungakhathaliseki ukuthi ubukeka kuphi, kunezinkohlakalo kuyo yonke indawo. Kuyinto yokuphelelwa ithemba ", kusho.
Ukuvikelwa kwezintatheli. Ngamazwi mahhala Januwari 26th, i-2019Oliver Bienkowski
Umake: Chancellery Federal, UDaphne Caruana Galizia, Vikela izintatheli